Dawlada Qatar oo bahdishay Fahad yaasiin kuna tilmaamtay Jaajuus ushaqeenayey | Entertainment and News Site
Home » News » Dawlada Qatar oo bahdishay Fahad yaasiin kuna tilmaamtay Jaajuus ushaqeenayey
Dawlada Qatar oo bahdishay Fahad yaasiin kuna tilmaamtay Jaajuus ushaqeenayey
daajis.com:- Sida muuqata Dawlada Qatar ayaa kala fogaanaya iyada iyo Agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin xaaji daahir kadib markii ay u aqoonsatay jaajuus ushaqeyn jiray.
Fahad oo dhawaan xildhibaan baarlamaanka 11aad Soomaaliya loogu doortay kursi yaallay Beled weyne inkastoo la hakiyey hadana waxa uu wajahayaa dagaal kale oo dhinaca Rooble Aheyn kaga imaanaya.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Dalka Qatar marna soo noqday Wasiirkii Arrimaha dibadda ee dalkaas Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani ayaa sheegay in ay sanadkaan soo baxeen xubno soomaaliyeed oo basaasiin u ahaa.
Dadka uu sheegay Jassim ayaa waxay ahaayeen wariyeyaal Carbeed oo jaajuusiin u ahaa dalkiisa Qatar oo hadda qaarkood xildhibaano noqdeen,inkastoo uusan magac dhabin.
Wareysi laga qaaday Sheikh Hamad bin Jassim Al-thani ayuu carabka ku adkeeyey in siyaasiyiinta Soomaaliyeed yihiin kuwo dhuunta wax ka maqla oo qofkii lacag siiya uu adeegsan karo.
“Hadda waxaan kuu sheegi karaa kuwo hore wariyayaal warbaahinta islamarkaana ku jiray payroll-keena lacagna ay siineynayeen hadda ay noqdeen kuwo Baarlamaanka Dalkoosa Soomaaliya ku biiray, Qaarkood hadda waa xildhibaano, qaarkood waa waddaniyiin. Waan aqaanaa, Waddamo badan ayey joogaan lacag ayaan siineynay… Sanad kasta mushaar ayaan siineynay, qaarkood ayaa gunnooyin lahaa” ayuu yiri Hamad.
Inkastoo Soomaaliya iyo dalal kale ay ka mid yihiin kuwa Africa iyo Carabta kale ay basaasiintaasi ujoogeen,hadana sargaalkaasi Qatar udhashay ayaa kashifay xaalad hore shakigeeda loo qabay.
“Dawladaha carabta dhan ayaa sameyneysay dhammaantood maaha laakiin inta badan” ayuu raaciyay barnaamijka jawaasiiska ah.
Fahad Yaasiin ayaa ah malkiilaha Dawlada Soomaaliya isagoo shantii sano lasoo dhaafay ahaa marjaca ugu dambeeya ee iska leh go’aanka ugu Xukunka dalka.
Dawlada Qatar ayuuna gacan saar dhaw la lahaa,isagoo sidoo kale ahaa mar soo ahaa wariye ushaqeenayey telefishinka afka carabiga ku hadla ee Aljazeera ee Doha xaruntiisu tahay.
Posted by Bulsha Arrimaha Bulshada, Published at 19:26 and have